Nhau - Basa rekutakura zvinhu
Kazhinji kutaura, chigadzirwa chingave nemapakeji akati wandei. Bhegi remazino rine mushonga wemazino kazhinji rine katoni kunze, uye kadhibhodhi bhokisi rinofanira kuiswa kunze kwekatoni rekufambisa nekubata. Kuisa uye kudhinda kazhinji zvine mabasa mana akasiyana. Nhasi, mupepeti weChina Pepa Net inokutora iwe kuti udzidze zvakawanda nezve izvo zvirimo zvemukati.
Kavha ine mabasa mana:
(1) Iri ndiro basa rinonyanya kukosha. Zvinoreva kuchengetedza zvinhu zvakapakurwa kubva panjodzi nekukuvara senge kuvhuna, marara, kuba, kurasikirwa, kumwaya, hupombwe, kudzikira, uye kupunduka. Munguva kubva mukugadzirwa kusvika pakushandisa, matanho ekudzivirira akakosha kwazvo. Kana kurongedza kusingakwanise kuchengetedza zvirimo, rudzi urwu rwekupakata kutadza.
(2) Ipa nyore. Vagadziri, vatengesi, uye vatengi vanofanirwa kufambisa zvigadzirwa kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe. Mushonga wemazino kana zvipikiri zvinogona kufambiswa zviri nyore mudura nekuzviisa mumakatoni. Iko kusinganzwisisike kurongedza kwemapundu uye poda yekuwachisa yakakanganiswa neiyo diki diki Inotsiviwa nekurongedza; panguva ino, zviri nyore kwazvo kuti vatengi vatenge uye vatore kumba.
(3) Yekuzivikanwa, iyo chigadzirwa modhi, huwandu, zita uye zita remugadziri kana mutengesi rinofanira kuratidzwa pane inoiswa. Kupakata kunogona kubatsira maneja edura ekuwana zvigadzirwa nenzira kwayo, uye zvinogona zvakare kubatsira vatengi kuwana zvavanoda.
(4) Kurudzira kutengesa kwezvimwe zvigadzirwa, kunyanya muzvitoro zvakasarudzika. Muchitoro, kurongedza kunokwezva kutarisisa kwevatengi uye kunogona kuita kuti afarire. Vamwe vanhu vanofunga kuti "bhokisi rega rega repakadhi ibhodhi rebhodhi." Kupaka kwakanaka kunogona kuwedzera kukwezva kwechigadzirwa chitsva, uye kukosha kwepakeji pachayo kunogona kukurudzira vatengi kutenga chimwe chigadzirwa. Uye zvakare, kuwedzera kukwezva kwepakeji kwakachipa pane kuwedzera mutengo weyuniti yechigadzirwa.